35km monja miala an'i Dublin, ambanivohitr'i Naas dia mamela anao hanala ny adin-tsaina amin'ny hetsika any amin'ny firenena toy ny mitaingina soavaly, golf ary fitsidihana ireo trano tranainy taloha. Naas dia eo amin'ny Grand Canal tamin'ny taonjato faha-18, izay tsara tarehy toy ny sary, ary mazava ho azy, ny faritra dia manankarena amin'ny kolontsaina equine misy hazakazaka sy toeram-piompiana stud maro.
Naas, tanàna tsena mimanda taloha, no tanànan'i Kildare. Ny faritra dia manankarena amin'ny kolontsaina soavaly misy hazakazaka roa - Punchestown, fonenan'ny hazakazaka jumps irlandey sy Naas, izay manao hazakazaka fisaka sy fihazana; Goffs Bloodstock Sales sy toeram-piompiana stud maro. Ankafizo ny fitsangantsanganana miala voly manamorona ny Grand Canal miaraka amin'ny fitsangatsanganana miainga avy any Sallins, mankafy ny tsiron'ireo trano fisakafoanana sy gastro-pub maro manerana ny faritra na ho an'ireo mpankafy môtô, zahao izay rehetra atolotr'i Mondello.
Toerana tsara indrindra any Naas
Trano fisakafoanana an-tsakaiza sy mahafinaritra an'ny fianakaviana mijery ny Grand Canal.
Zavatra folo tokony hatao manodidina an'i Naas
Fantaro bebe kokoa ao Naas
Manohana any an-toeranatrano fisakafoanana
Café mihodinaPubs & NightlifeGastro-Pubs
Mpiandry Ondry miasa any Irlanda
Lova sy tantaraManohana any an-toerana
Adventure sy hetsikaFianakaviana ankohonanytrano fisotroana kafe